IProjekthi Comet ngoku ibizwa ngokuba yi 'Adobe Experience Design' | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UYesu Arjona Montalvo | | ngokubanzi, Izixhobo zoYilo
Inkqubo yeAdobe 'Iprojekthi yeComet'Igama elinye 'Uyilo lwamava eAdobe', kwaye ukujonga kwangaphambili ngoku kuyafumaneka kuye nabani na oneakhawunti yeAdobe. Akukho zixhobo zininzi ezijongana neendawo ezininzi kwingxaki yoyilo lwesicelo. I-Adobe ibeke "i-Adobe Experience Design" ukuze ikhuphisane ngqo nayo Umdwebo, kwaye uyayenza ngendlela emnandi. Ayizukukwazi kuphela ukuyila ifayile ye- Iitafile zomsebenzi, iya kukuvumela ukuba wenze utshintsho olukhulu kunye prototype. Isishwankathelo soYilo lwamava eAdobe I-Adobe XD.
Iqala ngohlobo lweprojekthi onayo kakhulu Iwebhu, i-iPhone, i-iPad okanye uyilo lwesayizi yesiko, kodwa ikwalayishe iipakethe ze-UI ngaphambili. Unokukhetha phakathi iOS, Uyilo lwezixhobo zikaGoogle o Windows, ikwabonisa iifayile zakutshanje ukuze ubuyele kwiprototyping.
Uyilo lwamava eAdobe apho likhanya ngokwenene kuxa unakho iiprojekthi ezinkulu. Zininzi iitafile zomsebenzi ezinokutshintshwa, zombini ngaphakathi amaqashiso kwaye kanjani eyahlukileyo. Ubungakanani kunye nefonti yezinto zinokutshintshwa ngokuzibeka ngokwamaqela. Sibeka ikhonkco lokukhuphela ekupheleni kwenqaku, kwaye okwangoku kuphela I-OSX (Mac).
Kwiibhodi zobugcisa ezintsonkothileyo, i-XD inento entsha yokucoceka ekuvumela ukuba wenze njalo ubungakanani obufanelekileyo bemifanekiso efihliweyo. Oku kuyakusindisa entlokweni yokutshintsha ubungakanani bemifanekiso emikhulu ofuna ukusebenza kuyilo.
Ukudalwa kwezinto kwi-interface njengoko ii-icon zilula kakhulu nge-XD. Unokugqiba ngokukhawuleza kwaye ngokulula ukuba zeziphi izinto zebhodi yeebhodi ekufuneka zigeleze kwiibhodi ezintsha, kwaye uyivavanye kwi-emulator. Nje ukuba ufake i-UX kwi-app, ukuyigcina Cloud Cloud ukusuka kwiAdobe kwaye ndikunike Yeyakho i-URL onokwabelana ngayo nabanye.
Abo bafikelela kwifayile ye- URL Ungayisebenzisa imveliso yakho "egqityiweyo" njengoko iyilelwe, eluncedo ekuboniseni iprojekthi esebenzayo kubaxumi. Okwangoku, i-Adobe XD ifumaneka kuphela kwi- SiNgesi, Kwaye yenzelwe OSX (IMAC).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » IProjekthi Comet ngoku ibizwa ngokuba 'yiAdobe yamaYilo'